MBP: Micro-ịde blọgụ na Protocol | Martech Zone
Fraịdee, June 13, 2008 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
O nwere ike ịbụ na ị gụọla banyere tiff obere oge Robert Scoble na Twitter. Scoble zutere Twitter wee dozie ọnọdụ ahụ. Fọdụ ndị folks na-ekwu maka ụdị azụmaahịa a na ọrụ micro-blogging ebe ewu ewu ọrụ na-akwụ ụgwọ maka ọrụ.
Ọ ga-amasị m ịnyefe ndụmọdụ ka mma ma nke ahụ bụ maka ntanetị ntanetị maka ntanetị (Enyi na enyi, Tumblr, Jaiku, Twitter, Pownce, Ahụhụ, Brightkite, Ngwa, Ajụjụ, wdg.) ikpebi na Micro-ịde blọgụ Protocol. All nke ọrụ ndị a nwere ike mgbe ahụ-Micro-ịde blọgụ na enye.
Ekwentị, vidiyo, ụda, njikọ, mgbakwunye, foto, na ozi nwere ike ịdị na otu usoro dị ọcha. Enwere ike iwepụta ikike 'ịgbaso' gafee nyiwe niile. Ihe ikpo okwu ọ bụla nwere ike ịdị iche na nke ọzọ na ngwa ọrụ ha yana ihu ha, mana ibu na ewu ewu nke ụfọdụ nwere ike bido gbasaa. Ọbụghị ndị na - eweta ọrụ ọ bụla ga - akwado mgbasa ozi dị iche iche. Nke a ga - eweta oge dị elu yana ndị ọrụ nwere ike ịlele ngwa ndị ahịa ha kacha hụ n'anya.
Ọ bụghị ụzọ ọhụụ - ọ ga - adị ka ndị na - eweta ọrụ ịntanetị jiri email mee. Enwere m ike iji onye ọ bụla zụrụ ihe masịrị m ma kpọtụrụ onye ọ bụla na listi ịkpọtụrụ m.
Yabụ n'ebe ahụ ị nwere ya - oge maka Protocol Micro-Blogging na ụlọ ọrụ ahụ! Ka anyị kpọọ ndị na-enye ya Micro-Blogging Providers. Ka anyi mee ka ihe ndia diri ndi ahia ahia!
Okporo ụzọ dị mma dị mma maka ọnụahịa nke uwe elu
Jun 13, 2008 na 11:59 AM
XMPP ga-eme nke oma.
Jun 13, 2008 na 2: 45 PM
N'anya a echiche, M na-eche ma ọ ga-eme eme ezie?
Jun 13, 2008 na 6: 37 PM
Micro ịde blọgụ kwesịrị ijikọ ọrụ ebe ndị ọrụ ga-enwe ike iji ya dị ka nnukwu ederede ederede (iji melite ndị enyi niile), ogwe ọnọdụ na netwọkụ mmekọrịta (dịka ọrụ ọnọdụ FaceBook), na ọbụlagodi email.
Jun 16, 2008 na 1:46 AM
Dị ka nnukwu echiche, belụsọ ma ọ dịkarịa ala otu onye ọ bụla n'ime ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ahụ ga-ewere ndị isi iji mee ya. Enwere m ike ịdị na-atụchasị uche, mana ahụla m ọtụtụ ihe metụtara ya nke nwere ike ime mana emeghị nke ahụ anaghị m ahụ nke a na-eme, opekata mpe ruo mgbe behemoth dị ka Google gosipụtara usoro ahụ wee sị “onye obula soro ya, ma obu ozo. ” Ndoo maka ịbụ ndị na-adịghị mma, mana otu ugboro na-eme ihere ugboro abụọ.
BTW, ejighi n'aka ma ọ bụrụ na ị hụrụ ma emesịrị m gbanwee m blog ka WordPress mgbe a onwe gị nyere iwu hiatus nke fọrọ nke nta ka otu afọ. A bụ m echere maka oge (na mkpali) ka emesịrị gbanwee site na ngwanrọ ochie m nke ghọgoro nsogbu na ọ bara uru. Ugbu a, enwere m ike ịme karịa naanị ịza ajụjụ na blọọgụ gị na ndị ọzọ; Enwere m ike bido ịde blọgụ ọzọ!
FYI, nke gị bụ naanị blọọgụ atọ (3) m depụtara dị ka onye na-arụsi ọrụ ike ugbu a. Echere m na m nwere ike itinye ngalaba ọzọ nke blogroll nke “Blọọgụ m ga-agbaso ma ọ bụrụ na m nwere oge!”Maka blọọgụ ndị ọzọ niile dị n’ebe ahụ. '-)
Jun 16, 2008 na 8:42 AM
Eziokwu ka a gwara m, Anaghị m agụ blọgụ (m hụrụ n'anya) dị ka m kwesịrị. Mgbe ụfọdụ ọrụ na-adabaghị;).
Enwere m ekele maka nkwado ma nabata na blogosphere, Mike!
Jun 16, 2008 na 4: 13 PM
N'ikwu eziokwu, anaghị m ahụ ka onye ọ bụla nwere oge iji gụọ ọtụtụ blọọgụ. Mgbe m kwere ka m gaa oge ebe m na-emeghị ihe ọ bụla ma mgbe ahụ ọ na-ewute m nke ukwuu maka onwe m maka ime otú ahụ. Mgbe ahụ ọ bụrụ na ejisiri m ike tinye onwe m na "mkparịta ụka" (gụọ "arụmụka") nke ahụ bụ mgbe ọ na-aghọ oge nsogbu. Amaghị m otú ndị na-bara uru n'ọrụ jikwaa ịchọta oge maka ya.
Mana otu n’ime ihe mere m ji aga n’ihu ka m gụọ nke gị bụ na, maka isiokwu ndị masịrị m, nke gị dị elu karịa na “akara” karịa na “mkpọtụ” karịa ọtụtụ blọọgụ. Kudos.